Coronavirus: Xayiraaddii socdaalka ee Trump uu Yurub ku soo rogay oo dhaqangashay | Xaysimo
Home War Coronavirus: Xayiraaddii socdaalka ee Trump uu Yurub ku soo rogay oo dhaqangashay
Coronavirus: Xayiraaddii socdaalka ee Trump uu Yurub ku soo rogay oo dhaqangashay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Turmp ayaa xayiraaddii socdaalka aheyd ee uu ku soo rogay 26 dal oo Yurub ah waxa ay ka dhaqangashay waddanka Mareykanka, arrintaas oo qeyb ka ah qorshe ka hortag ah oo lagu xakamaynayo dhibaatada cudurka coronavirus.
Xayiraaddaas waxa ay saameynaysaa dalalka xubnaha ka ah aagga Schengen waxaanse ku jirin UK, Jamhuuriyadda Ireland iyo muwaadiniinta Mareykanka ee dalkooda ku laabanaya.
Mr Trump ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah, waxa uuna fasaxay ilaa 50 bilyan oo doolar oo gargaar ah.
Ku dhawaad 2,000 oo kiis oo caabuqa Covid-19 ayaa laga helay gudaha Mareykanka halka dhimashaduna ay marayso 43.
Maamulka Mr Trump ayaa waxa uu wajahay dhaleecayn ku aaddan sida uu ugu guuldarraystay inuu dadka Mareykanka siiyo baaritaan baahsan oo coronavirus ah.
Wararka kale ee maanta ku soo kordhay xogta Coronavirus:
New Zealand, Ra’iisul Wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in qofkasta ee dalkeeda soo galaya laga bilaabo saqda dhexe ee caawa oo Axad ah ay tahay inuu is karantiilo muddo 14 maalmood ah; waxaanse ku jiri doonin dadka ka imanaya jasiiradaha yaryar ee Koonfur badda Pacific-ga
Australia, tirada kiisaska la xaqiijiyay ee cudurka ayaa waxa ay sare ugu kacday 200 halka saddex qofna ay dhinteen
Shiinaha, mas’uuliyiinta ayaa sheegay in 13 ay dhinteen 11 kiis oo cusub oo cudurkaasi ahna la arkay
Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warrantay in in ka badan (204) ay cudurkaasi ka soo kabsadeen halka tirada kiisaska cusubna ay hoos u dhaceen – maalintii labaad oo xiriir ah
Colombia ayaa sheegtay in ay xiri doonto xadka ay la wadaagto Venezuela saacaddu marka ay tahay 05:00 (10:00 GMT), dalkeedana ay ka celin doonto musaafiriinta dhawaan booqatay Yurub ama Aasiya
UK, waxaa la mamnuucayaa dhammaan goobaha ay dadka isugu yimaadaan laga bilaabo dabayaaqada todobaadka, ilo wareed dowladda ah ayaa sidaasi sheegay
Dhanka kale, Washington ayaa Jimcihii waxa ay u yeertay safiirka Shiinaha si ay uga cabato hadal ka soo yeeray diblumaasi Shiinees ah oo sheegay in milateriga Mareykanka ay suuragal tahay inuu cudurka Coronavirus uu soo galiyay waddanka Shiinaha.
Coronavirus ayaa waxa uu ka soo bilowday gobolka Hubei ee waddanka Shiinaha dabayaaqadii sanadkii hore.
Hasayeeshee heerka maalintii ee dadka cusub ee uu cudurkaasi ku dhaco ayaa hoos u dhacaysay gudaha Shiinaha, taas oo Yurub ka dhigtay “udub dhexeedka” cudurkan safmarka ah.
Talyaaniga ayaa Jimcihii waxa uu diiwaangeliyay maalintii ugu dhimashada badnayd oo tirada dhimashada waxa ay gaartay – 250 qof oo 24 saacadood naftoodii waayay, taas oo tirada dhimashada ka dhigaysa 1,266, halka 17,660 ay cudurkaasi la ildaran yihiin.
Si si wanaagsan cudurkaasi caalamka loogaga falceliyo ayaa hogaamiyayaasha dalalka ugu qanisan dunida ee G7 waxa ay Isniinta yeelan doonaan shir muuqaal ah oo dhibaatada looga hadlaayo.
Waa kuwee dalalka Yurub ee ay saamaysay xayiraadda socdaalka ee Mareykanka?
Mareykanku waxa uu xayiraadda ku soo rogay 26 dal oo Schengen ah waxa ayna socon doontaa muddo 30 maalmood ah – oo kala ah 22 dal oo Midowga Yurub xubno ka ah iyo afar aan xubno ahayn.
Dalalkuna waxa ay kala yihiin Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden iyo Switzerland.
Mr Trump ayaa sheegay in UK aanay ku jirin xayiraadda hasayeeshee waxaa suuragal ah in go’aankaas dib loo eego sababtoo ah tirada kiisaska cudurkaas ayaa “aad sare ugu kacay 24-kii saacadood ee ugu dambeeyay”.
Xayiraadda socdaalka ee Mareykanku uu soo rogay ayaa waxaa loogala horyimid caro iyo jahawareer, iyadoo hogaamiyayaasha Midowga Yurub ay Madaxweyne Trump u eedeeyeen inuu go’aan iska gaaray “iyadoo uusan wax wadatashi ah samayn”.